Daawo: Xildhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq oo la dhaariyey, lana siiyey kaarar - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Xildhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq oo la dhaariyey, lana siiyey kaarar
Daawo: Xildhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq oo la dhaariyey, lana siiyey kaarar
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa goordhow magaalada Muqdisho lagu dhaariyey 16-kii xildhibaan ee laga soo doortay magaalada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo ee Jubaland, taasi oo ka dhigeysa inay yihiin xildhibaano sharci ah oo ku biiray baarlamanka 11-aad.
Dhaarinta xildhibaanadaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee Golaha Shacabka Cabdisalaan Axmed Dhabanacad iyo Xoghahaya Guud ee baarlamanka Cabdikariim Cabdi Buux. Waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ee FEIT.
Xildhibaanada 16-ka ah ee la dhaariyey ayaa sidoo kale la siiyey kaararka aqoonsiga, taasi oo u fududeyneysa inay ka qeyb galaan kulamada golaha shacabka ee baarlamanka 11-aad.
Xildhibaanadan ayaa 23-kii bishan lagu soo doortay magaalada Ceelwaaq, kadib markii guddiga doorashada heer federaal ay go’aamiyeen inaysan doorasho ka dhici karin magaalada Garbahaarey, oo aheyd deegaan doorashada labaad ee Jubaland.
Dhaarinta xildhibaanadan iyo siinta kaararka aqoonsiga ayaa ka dhigan inay soo afjarantay dooddii ka taagneyd doorashada xildhibaanada gobolka Gedo, ayada oo ay jirto in xubno kale lagu doortay magaalada Garbahaarey.
Xubnaha lagu doortay Garbahaarey ayaa galabta kasoo muuqday muuqaallo lasoo dhigay facebook ayaga oo hortaagan darbiga xerada Xalane, islamarkaana codsanaya in la dhaariyo, balse ma jirin cid u jawaabtay ama la hadashay.